Ungawukhetha Kanjani Umthombo Omuhle Wamanzi Ahlakaniphile?
Uyabona yini ukuthi ikati lakho libukeka lingathandi amanzi okuphuza? Kungenxa yokuthi okhokho bamakati bavela ezingwadule zaseGibhithe, ngakho-ke amakati ancike kwizakhi zofuzo ekudleni kwe-hydration, kunokuphuza ngqo. Ngokwesayensi, ikati kufanele liphuze u-40-50ml wamanzi ngekhilogremu lesisindo somzimba ngosuku. Uma ikati liphuza kancane, umchamo uzoba phuzi bese indle izoma. Ngokuzimisela kuzokwandisa umthwalo wezinso, amatshe ezinso nokunye. (Inci ...
(Inothi loMhleli: Le ndatshana, ihunyushwe ukusuka kuZigBee Resource Guide.) Ucwaningo kanye nezimakethe kumemezele ukwengezwa kombiko “Wokuxhuma Ikhaya Nezinto Zokusebenza Ezinobuhlakani zango-2016-2021 ″ kulokho abakunikelayo. Lolu cwaningo luhlola imakethe ye-Intanethi Yezinto (IoT) Emakhaya Axhunyiwe futhi lubandakanya ukuhlolwa kwabashayeli bezimakethe, izinkampani, izixazululo, kanye nokubikezela ngonyaka wezi-2015 kuya kowezi-2020. Lolu cwaningo lubuye luhlolisise imakethe ye-Smart Appliance okubandakanya ubuchwepheshe, izinkampani, izixazululo ...
I-OWON ingumkhiqizi onguchwepheshe wemikhiqizo nezixazululo ze-Smart Home. Eyasungulwa ngo-1993, i-OWON ithuthuke yaba umholi embonini ye-Smart Home emhlabeni wonke ngamandla e-R & D anamandla, ikhathalogi yomkhiqizo ohlanganisiwe nezinhlelo ezihlanganisiwe. Imikhiqizo yamanje nezixazululo zimboza ububanzi, kubandakanya i-Energy Control, Lighting Control, Security Supervision nokunye. Izici ze-OWON kuzixazululo zokuphela kokuphela, kufaka phakathi amadivayisi ahlakaniphile, isango (ihabhu) neseva yamafu. Lesi sakhiwo esakhiwe ...
OWON embukisweni we-7th China (Shenzhen) International Pet Supplies Exhibition
Umbukiso we-7th China (Shenzhen) International Pet Supplies Exhibition ngumbukiso wobuchwepheshe owenziwe yi-HONOR TIMES. Ngemuva kweminyaka eminingi yokuqongelela nemvula, sekube ngumbukiso omkhulu kunayo yonke futhi onethonya embonini eChina. I-Shenzhen Pet Fair isungule ubudlelwano bamasu besikhathi eside namakhulu emikhiqizo eyaziwayo yasekhaya neyangaphandle ukuqinisekisa ikhwalithi yombukiso, njengeROTAL CanIN, NOURSE, HELLOJOY IN-PLUS, PEIDI, CHINA PET DOODS, HAGEN NUTRIENC .. .
OWON uzoba se-The 7th China (Shenzhen) International Pet Supplies Exhibition
Isikhungo se-7th China (Shenzhen) International Pet Supplies Exhibition 2021/4 / 15-18 Shenzhen Convention and Exhibition Centre (Isifunda saseFutian) iXiamen OWON Technology Co., Ltd. Inombolo Yesiboniso: 9E-7C Simema ngobuqotho abathengisa nabangane emhlabeni wonke ukuba bavakashele, futhi bafune ithuba lokubambisana!
I-ZigBee 3.0: Isisekelo se-Intanethi Yezinto: Kuthunyelwe futhi Kuvulekele Izitifiketi
(Inothi loMhleli: Le ndatshana, ihunyushwe ukusuka kuMhlahlandlela Wezinsizakusebenza zeZigBee · Uhlelo luka-2016-2017.) I-Zigbee 3.0 ukuhlanganiswa kwezindinganiso ezingenantambo ezihola phambili ezimakethe ze-Alliance zibe yisixazululo esisodwa sazo zonke izimakethe eziqondile nezisetshenziswayo. Isixazululo sihlinzeka ngokusebenzisana okungenamthungo phakathi kobubanzi obubanzi kakhulu bamadivayisi ahlakaniphile futhi sinikeza abathengi namabhizinisi ukufinyelela kwimikhiqizo namasevisi amasha asebenza ndawonye ukukhulisa impilo yansuku zonke. Isixazululo seZigBee 3.0 senzelwe ...
I-ZigBee, i-IoT kanye ne-Global Growth
(Inothi loMhleli: Le ndatshana, ihunyushwe ukusuka kuMhlahlandlela Wezinsizakusebenza zeZigBee.) Njengoba nje inqwaba yabahlaziyi ibikezele, i-Intanethi Yezinto (IoT) ifikile, umbono osekuyisikhathi eside uyiphupho labathandi bezobuchwepheshe yonke indawo. Amabhizinisi nabathengi ngokufanayo babona ngokushesha; babheka amakhulu emikhiqizo ethi "ihlakaniphile" eyenzelwe amakhaya, amabhizinisi, abathengisi, izinsiza, ezolimo - uhlu luyaqhubeka. Umhlaba ulungiselela ...
Ukuhola Indlela Ngemikhiqizo Engasebenziseka
Izinga elivulekile lihle kuphela ekusebenzisaneni kwemikhiqizo yalo okukuzuza emakethe. Uhlelo Oluqinisekisiwe lweZigBee lwasungulwa ngenhloso yokuhlinzeka ngenqubo ebanzi, ephelele ezokwenza ukuthi ukuqaliswa kwamazinga ayo kwenziwe kumikhiqizo eseyimakethe ukuze kuqinisekiswe ukusebenzisana kwabo nemikhiqizo efanayo egunyaziwe. Uhlelo lwethu lusebenzisa ubuchwepheshe bohlu lwethu lwenkampani ye-memeber engama-400 + ukuthuthukisa isethi ephelele futhi ephelele ...
Kungani usebenzisa i-Zigbee nge-Wireless IOT Solution yakho?
Isilinganiso esingcono sithi, kungani kungenjalo? Ubuwazi ukuthi iZigbee Alliance yenza ukucaciswa okungenantambo okungenantambo, amazinga kanye nezixazululo zokuxhumana okungenantambo kwe-IoT okungabonakali? Lokhu kuchazwa, amazinga kanye nezixazululo konke kusebenzisa amazinga we-IEEE 802.15.4 wokufinyelela kwe-physocal kanye nemidiya (i-PHY / MAC) ngokuxhaswa yiqembu le-2.4GHz lomhlaba wonke kanye namaqembu wesifunda we-sub GHz. Ama-transceivers ahambisanayo we-IEEE 802.15.4 namamojula atholakala ezindaweni ezingaphezu kwama-20 ezahlukahlukene ...
Isevisi ye-ODM egcwele phama yokufeza izinjongo zebhizinisi lakho
I-About OWON OWON Technology (ingxenye yeLILLIPUT Group) iyi-ISO 9001: 2008 Certified Design Manufacturer ekhethekile ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwemikhiqizo ehlobene ne-elekthronikhi kanye nekhompyutha kusukela ngo-1993. Isekelwa isisekelo esiqinile kubuchwepheshe obushumekiwe bekhompyutha nobuchwepheshe be-LCD, nangokuthi ngokubambisana nabadlali bezimboni ezinkulu, i-OWON iqhubeka ihlanganisa ubuchwepheshe be-IOT ekuxubeni kwayo kwezobuchwepheshe, inikela ngemikhiqizo ebekiwe nezixazululo ezenziwe ngezifiso ze-uili ...
Uhlelo oluphelele kunazo zonke lweZigbee Smart Home System
Njengomhlinzeki oholayo wamadivayisi nezixazululo ezisuselwa kuZigBee nezixazululo, u-OWON ukholelwa ukuthi njengoba "izinto" eziningi zixhunywe kwi-IoT, uhlelo lwasekhaya oluhlakaniphile luzokhuphuka ngenani. Le nkolelo ikhulise isifiso sethu sokuthuthukisa izinhlobo ezingaphezu kuka-200 zemikhiqizo esekwe eZigBee. Uhlelo lwasekhaya oluhlakaniphile lwe-OWON limboza: Ukuphathwa kokukhanyisa Isilawuli sokusebenza kwekhaya Ukuphepha kwekhaya ukunakekelwa kwempilo kwe-IP ikhamera Ikhaya le-smrt lingaba umbono ohambisanayo, futhi izidingo zamakhasimende ziyahlukahluka kakhulu ...
IYIPHI INHLOBO YAMAPULAgi EMAZINI EHLUKILE? INGXENYE 2
Ngalesi sikhathi sethula ngokuqhubekayo amapulagi. 6. I-Argentina Voltage: Imvamisa ye-220V: Izici ze-50HZ: Ipulagi inezikhonkwane ezimbili eziyisicaba ku-V-shape kanye nakumaphini wokubeka phansi. Uhlobo lwe-plug, olunezikhonkwane ezimbili eziyisicaba, lukhona futhi. I-plug yase-Australia nayo isebenza ngezisekelo eChina. I-7.Australia Voltage: Imvamisa ye-240V: Izici ze-50HZ: Ipulagi inezikhonkwane ezimbili eziyisicaba ku-V-shape kanye nakwiphini lokubeka phansi. Uhlobo lwe-plug, olunezikhonkwane ezimbili eziyisicaba, lukhona futhi. I-Au ...
Ungayikhetha Kanjani i-Smart Smart Water Foun ...